Ho avy ny tontolo tsy misy Potinina, fa afa-miaina anaty tontolo tsy misy Rosia ve isika? · Global Voices teny Malagasy
Mety mahavita ny fanasaziana saingy tsara kinendry ve ny Tandrefana?
Voadika ny 05 Avrily 2022 5:25 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, عربي, Français, Italiano, srpski, Nederlands, 繁體中文, русский, українська, English
Kremlin, foiben-toeran'ny governemantan'i Rosia. Photo avy amin'i Larry Koester ao amin'ny Flickr (CC BY 2.0)
Nampisara-kevitra ny fametrahana sazy ho an'i Rosia. Ny loharanom-baovao rosiana, avy amin'ny governemanta sy ny ôligarka, dia samy milaza fa diso kinendry ny Tandrefana. Raha misy ny tondro sasantsasany mampiseho fa voa ihany, amin'ny lafiny sasany, ny toekaren'ny firenena, misy kosa ireo mpamakafaka sasany manolo-kevitra fa tsy ampy izany hanaovana fanerena hampitsaharana ny ady. Misy tokoa ny tsipika hisian'ny fahavoazana bebe kokoa ho an'ireo sangany Rosiana saingy mampanontany tena farafahakeliny raha mety hitarika fiovan-kevitry ny sangany na fandroahana an'i Vladimir Potinina sy ny manodidina azy akaiky ny fanerena mafy kokoa.
Ao amin'ny bokiny “From Dictatorship to Democracy,” [Avy amin'ny jadona mankany amin'ny demaokrasia] i Gene Sharp manolo-kevitra fa ny fomba “hamonoana” mpanao didy jadona dia ny fanalana aminy fanohanam-bahoaka. Toa mbola safidy lavitra ihany izany ho an'i Rosia, raha jerena ny fanohanana, mavitrika na mangina, azony avy amin'ny ankamaroan'ny mponina.
Saingy tsy ny fitroaram-bahoaka ihany no lalana tokana hampisy fanovana any an-tampon'ny firenena. Araka ny nasongadin'ny “The Dictator’s Handbook” (Ny boky fanao an-tanan'ny mpanao didijadona), rehefa leo mpitarika iray ny mpifantina (ireo sangany matanjaka indrindra amin'ny firenena, ireo izay ilain'ny mpanao didy jadona hitoetra eo amin'ny fitondrana), dia afaka manilika azy izy ireo ary mandamina ny fanovana mpiambina. Ny fandroahana an'i Putin dia tsy midika ho fiovana tanteraka eo amin'ny fiaraha-monina Rosiana fa mety hitarika amin'ny fampihenana ny fifandonana amin'i Okraina.
Toa mametraka ny siosion-dresaka momba an'i Kremlin fa efa mihalohalo any ny fiovana sanga. Saingy mbola lavitry ny afo ny kitay raha mbola manidy ny manodidina an'i Potinina manontolo ny sazy. Alaivo sary an-tsaina hoe olona akaiky an'i Potinina ianao ka afaka manomana karazana fanonganam-panjakana. Tsy maintsy miatrika ny tarazo navelan'ny ady ianao ary mamorona tantara iray hampatoriana ny tsy fahafaham-po amin'ny famongorana ny mpanao politika tiam-bahoaka indrindra ao amin'ny firenena. Ary zara raha afaka miantehitra amin'ny fanohanana avy any ivelany ianao: mety ho voasazy mafy ianao; mety horaofina na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona ny fanananao any Londres sy ny yacht (sambo rendrarendra) anao ary mety ho voaasmbotra koa aza ianao raha mandia ny Vondrona Eoropeana na Etazonia. Manana antoka ve ianao fa ny fanesorana an'i Potinina dia hanokatra ny lalanao ho amin'ny fanavotana?
Ao anatin'izany sanda izany, safidy eo amin'ny fifikirana amin'ny sambo rendrika na fitsambikinana anaty rano tsy manana fitafiana aro rendrika. Maro ny afa-mitabataba amin'izany fa vitsy no hahasahy hitsapa vintana amin'izao Rosia ankehitriny izao.
Azo atao ve ny manozongozona, ao anatin’ny herinandro vitsivitsy, ny rafitra nitarika ny fiforonan'ny sangany ankehitriny ao anatin’ny 30 taona? Ary azo atao ve ny manao izany avy aty ivelany? Tsy hisy revolisiona Rosiana 2.0 ato ho ato. Ho lasa i Potinina saingy izay voavolavola tamin'ny tanimanga iray aminy ihany no hisolo azy.
Tsy hanaiky faharesena mihitsy i Potinina fa angamba amin'ireo sangany no misy olona vonona handravona ny toe-draharaha sy hanome tsiny ny ady sy ny zavatra hafa rehetra amin'ny filoha ankehitriny. Mety ho fomba mahomby hanovana ny fijoroan'i Rosia tsy mila miditra ady maneran-tany ny sazy amin'izao fotoana izao, sy ny fanerena ara-diplaomatika, fa raha helohina manontolo ny sangany Rosiana, iza no hitondra ny enta-mavesatra ho filoha Rosiana manaraka? Ary hisokatra hifampiresaka amin’ny Tandrefana ve izy?
Manana fanantenana kely ihany aho fa ho mpankafy ny Vondrona Eoropeana ny mpitarika Rosiana manaraka, hanaja ny fahalalahan'ny tsirairay, na hikarakara ny vahoakany mihitsy aza, saingy tokony ho olona vonona kokoa noho i Potinina hanao fifanakalozan-dresaka manangana miaraka amin'ny manodidina azy.
Tsy afa-mampiditra demaokrasia ao Rosia isika; ny Rosiana ihany no mila manao izany, raha hiraharaha izany ny fiarahamonina Rosiana. Saingy azontsika atao farafaharatsiny ny mametra ny loza mety hitranga amin'ny ady ho avy sy manokatra ny lalana mankany amin'ny fifampiresahana momba ireo lohahevitra lehibe — tsy amin'i Potinina fa amin'ny mpandimby azy. Ary mora kokoa ny mahazo fifanarahana amin'ny fifampiresahana noho ny fanapahanao izay fifandraisana rehetra sy mampiorina ny hetsikao amin'ny fiheverana izay mety ho eritreritry ny andaniny.
Jereo ny pejy manokana fitantarana an'i Rosia manafika an'i Okraina raha hijery torohay bebe kokoa.